Ny OnePlus 6T dia havoaka amin'ny volana oktobra miaraka amin'ny fiakaran'ny vidiny | Androidsis
Volana roa lasa izay dia niditra an-tsena ny OnePlus 6. Io no avo lenta farany ambony an'ny marika sinoa, izay manana fahombiazana lehibe eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Toy ny mahazatra, ny orinasa dia miasa amin'ny endriny nohatsaraina izay ho tonga amin'ny fararano. Miresaka momba ny OnePlus 6T isika, izay efa tonga any aminay amin'izay mety ho daty fanombohany, farafaharatsiny vonjimaika.
Ity OnePlus 6T ity dia ho endrika mitovy amin'ny telefaona natomboka volana roa lasa izay. Andrasana ny fanatsarana sasantsasany, na dia mbola tsy fantatra aza hoe amin'ny faritra aiza no hanaovana fanatsarana ireo.
Ity finday ity dia antenaina hamely ny tsena amin'ny volana oktobra. Dimy volana àry no lasa teo anelanelan'ny fandefasana ny maodelin'ny mpanamboatra roa. Fotoana fohy somary fohy, ary mety hisy fiatraikany amin'ny varotra finday roa ireo.
Ary koa, ny OnePlus 6T dia antenaina ho tonga miaraka amin'ny fiakarana vidiny. Tsy afaka nanamarina anefa ny haino aman-jery sasany dia milaza fa 550 $ ny finday. Izay fiakarana kely amin'ny vidiny, amin'ny $ 20 fotsiny, raha oharina amin'ilay maodely tany am-boalohany natomboka tamin'ny lohataona. Fahasamihafana kely amin'ity tranga ity.
Na dia omena tsiny aza ny marika noho ny fiakaran'ny vidin'ireo maodeliny isan-taona. Noho izany, ny tsena dia mety tsy mahazo tsara izany rehetra izany ny fiakaran'ny vidiny izay heverina fa kasaina hatao amin'ity OnePlus 6T ity. Raha toa ka farany ity fiakaran'ny vidiny ity.
Amin'izao fotoana izao ny fanovana izay hapetraka amin'ity OnePlus 6T ity dia tsy fantatra. Ny maodely tamin'ny taon-dasa dia nisy fanatsarana endrika, ary endrika hafa vitsivitsy. Saingy tsy be loatra ny fanovana. Noho izany, dia toa tsy manantena fanovana mahery vaika isika amin'ity taona ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » OnePlus » Ny OnePlus 6T dia ho tonga amin'ny volana oktobra miaraka amin'ny fiakaran'ny vidiny
Mitondra zava-baovao ho antsika i King: Legend of Solgard, RPG mahay mifandimby namboarina tsara